Munin'ina - Wikipedia
Shoko rokuti munin'ina kana mushoma (younger brother or sister) rinoreva munhu akaberekwa nababa kana amai vako anenge ari mudiki kwauri pamakore ekuzvarwa. Nekumwe kutaura shoko rokuti munin'ina rinonyanya kushandiswa kutaura munhu wechirume anenge ari mudiki kwauri mumhuri. Kana munin'ina ave wechikadzi kunonyanya kushandiswa shoko rokuti sisi kana kuti hanzvadzi.
Shoko iri rinoshandiswazve kureva munhu akaberekwa nemunin'ina kana mukoma wababa vako uye ari mudiki kwauri pamakore okuzvarwa -(younger male cousin born to father's brothers). Mukoma kana munin'ina wababa ari kurehwa pano anenge ari munhu wechirume.
Shoko iri rinoshandiswazve kureva munhu akaberekwa nemunin'ina kana mukoma waamai vako uye ari mudiki kwauri pamakore okuzvarwa - (younger male cousin born to mother's sisters). Mukoma kana munin'ina wababa ari kurehwa pano anenge ari munhu wechikadzi.
Kana mukoma ave wechikadzi kunonyanya kushandiswa shoko rokuti sisi kana kuti hanzvadzi.
VaTumbuka vanoti munung'una (n. younger brother) vachireva munun'una.
Izwi rokuti mng'ono (a younger brother) rinotautwa mururimi rweChewa, kureva munin'ina.
VaLozi vanoti munyani kana banyani pakuwanda (n. younger brother or sister ) kureva munin'ina.
Izwi rokuti omuangu (a younger brother) rinotautwa mururimi rweHerero, kureva munin'ina.
VaHerero vanoti -uangu kana -utiti (younger; inferior) kureva muduku kana chiduku pakukomba.
VaChewa vanoti nsuani kana asuani (cousin).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Munin%27ina&oldid=71949"
This page was last edited on 28 Kurume 2020, at 20:58.